विपन्न कलाकारको साथमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान - Parichay Network
विपन्न कलाकारको साथमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान
सन्तोष बस्याल द्वारा	 १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:०० मा प्रकाशित
पोखरा । कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वको अर्थतन्त्र तहसनसह भएको छ । विश्वमा आर्थिक संकट हुने समय नआउला भन्न सकिन्नँ । विश्वका शक्तिशाली मुलुक पनि कोरोना भाइरसका कारण हायलकायल छन् । कतिपय शक्तिशाली देशले त भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेर हजारौँ नागरिक गुमाइरहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । किस्ता-किस्तामा थपिएको लकडाउनको समय अवधि दुई महिनामा टेक्नै लाग्यो । यस्तो बेलामा दिनभर कमाएर दुई छाक टार्नेको हालत के भएको होला ? हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ ।
पछिल्लो समय ‘भोका मानिस’ रोगको पर्वाह नगरी सडकमा निस्कन थालेपछि सरकार पनि निरिह भएर लकडाउन खुकुलो गर्‍यो । लकडाउन खुकुलो गर्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या ५० मै सीमित थियो । तर, लकडाउन खुकुलो बनाएपछि संक्रमितको संख्यले दुई सय पार गर्‍यो । सरकारले फेरि क्रमश: लकडाउन कडाइ गर्दैछ ।
२०७६ चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण गरिब, असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, दृष्टिविहीन, ज्यालामजदुरी गर्ने मानिसहरू सबैभन्दा प्रभावित भए । सुरुका दिनमा भोक सहन नसकेर सयौँ किलोमिटर पैदल हिड्नेर घर जानेको जमात बाक्लो रह्यो । मजदुरजस्तै समस्या देशका ठूला शहरमा बसेर रेष्टुरेन्ट र दोहोरी साँझमा गीत गाउने कलाकारको छ । मजदुरले त राहत पनि पाए । तर, यी कलाकारको स्वाभिमानले राहतमा चामल लिन दिँदैन । हेर्दा उनीहरू सुकिलामुकिला हुन्छन् । तर, उनीहरूको व्यथा कसले बुझ्नेर ?
नेपालका अधिकांश जिल्लाको ग्रामीण भेगबाट कलाकार बन्ने रहरले काठमाडौं र देशका मुख्य शहरमा धाउनेहरुको जमात बाक्लै छ । उनीहरू विभिन्न दोहोरी साँझ तथा रेष्टुरेण्टमा आबद्ध छन् । दोहोरी साँझबाटै जीविकोपार्जन चलिरहेको छ । लकडाउनका कारण दोहोरी व्यवसाय सबै ठप्प छ । दोहोरी साँझमै आश्रित कलाकार मर्कामा छन् यतिबेला । लकडाउन सकिए पनि तत्कालनै भिडभाड हुने रेष्टुरेन्ट व्यवसायहरू चल्ने अवस्था छैन । व्यवसायमा समेत आर्थिक समस्या परेकाले लकडाउन अघिजस्तो कर्मचारी राख्ने वातावरण समेत नबन्न सक्छ ।
काठमाडौं, पोखरालगायत देशका विभिन्न शहरमा भएका कलाकारहरुको अहिलेको समस्या भनेको खाने बस्ने हो । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल लागिरहेको अध्यक्ष रमेश बिजी बताउँछन् ।
केन्द्रसँगै प्रतिष्ठानका शाखाहरू राहत वितरण कार्यमा लागिरहेको छ । यता प्रतिष्ठान गण्डकीले समेत राहत वितरण कार्यलाई तीव्र पारेको छ । समस्यामा परेका विपन्न परिवारका कलाकारलाई एक चरणको राहत वितरण गरिसकिएको अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ बताउँछन् ।
यसैबीच, प्रतिष्ठान गण्डकीकै आयोजनामा मंगलबार कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव तथा लोक दोहोरी कलाकारको अबको अन्योलपुर्ण यात्राको समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कलाकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका कलाकारहरूको उपस्थितिमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा १३ बुँदे निष्कर्ष निकालिएको गुरुङले जानकारी गराए ।
गण्डकी प्रदेशभित्र खासगरी पोखरामा रहेका कलाकारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, कलाकारको अवस्था बिश्लेषण गर्ने, अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने, कलाकारलाई स्थानिय प्रशासनसँग समन्वय गरी पोखरा भएका कलाकारलाई थाकथलो जाने वाातावरण सृजना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यस्तै, विभिन्न दोहोरी साँझमा काम गर्ने अपाङ्ग, दृष्टिविहीन कलाकारलाई विशेष हेरचाह गर्न राहत प्याकेज वितरण गर्न यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग आवश्यकताका आधारमा समन्वय गर्ने, दोहोरी साँझ रेस्टुरेन्ट सञ्चालक, दोहोरी व्यवसायी समितिसँग समन्वयगरी रोकिएको श्रमजीवी कलाकारको पारिश्रमिकबारे पहलकदमी गर्ने व्यवस्था समेत प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
राहत वितरण गर्दा विभेद नगर्ने, राहत वितरणका लागि श्रोत खोजी व्यवस्थापन गर्ने, कलाकारलाई बैकल्पिक कार्यमा जुट्नका लागि अनुरोध गर्दै उत्पादनशील काममा लाग्न प्रेरित गर्ने, कोरोना भाइरसले निम्ताएको चुनौतिलाई अवसरका रूपमा लिने, दोहोरी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कलाकारलाई आवश्यकताका आधारमा मनोसामाजिक परामर्श दिने र कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोले सबै कलाकार सचेत रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश बिजी, वरिष्ठ लोक गायिका प्राज्ञ हरिदेवी कोइराला, प्रतिष्ठानका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष प्राज्ञ प्रजापति पराजुली, पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम न्यौपाने, रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रशारण केन्द्र पोखराको निमित्त कार्यालय प्रमुख लोक गायिका शान्ती गुरुङ, केन्द्रीय सचिव जीवन दाहाल, केन्द्रीय सदस्य तारानाथ आचार्य, शंकर विरही गुरुङ, सरला पाण्डे, पोखरा दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष जीवन गुरुङ, प्रतिष्ठानकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पार्वती जिसी, कास्की जिल्ला अध्यक्ष टेक क्षेत्री, पर्वत जिल्ला अध्यक्ष दीपक गदालसहित प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश समितिका महिला उपाध्यक्ष माया गुरुङ, सहसचिव राम्जी पौडेल, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण सुवेदी, संगीत विभाग प्रमुख होम गुरुङको सहभागिता थियो ।